Waxaan la shaqeynay daraasiin macaamiil ah waxaanan dhisnay boqolaal boggag WordPress ah sanadihii la soo dhaafay. Maaha inay shaqadeenu tahay inaan abuurno bogag WordPress ah, laakiin waxaan u jeednaa inaan u qabanno macaamiil badan. Macaamiisha uma yimaadaan inay isticmaalaan boggaga WordPress badanaa. Caadi ahaan way noo yimaadaan si ay uga caawiyaan hagaajinta goobahooda raadinta, bulshada, iyo beddelaadda.
Badanaa maahan, waxaan marin u helnaa goobta si aan u hagaajino sheybaarada ama aan u dhisno sheybaarro deg deg ah oo cusub, waxaanan ogaanay wax aad u xun. Waxaan badiyaa helnaa mawduuc si fiican loo qaabeeyey, oo si fiican loo taageeray oo loo iibsaday aasaas u ah goobta ka dibna si heer sare ah wax looga beddelay hay'addii hore ee macmiilka.
Mawduucyada Carruurta ayaa sida caadiga ah lagu soo diyaariyey mawduuca waalidka waxaana loogu magacdaray dulucda cunugga dushiisa. Haddii dulucdaydu tahay Avada, Mowduuca Carruurta waxaa caadi ahaan loogu magac daray Avada Child oo wuxuu ka kooban yahay avada-cunug galka Taasi maahan heshiiska magacaabista ugufiican, sidaa darteed waxaan ugu magacdaraynaa dulucda feylka file.css, waxaan ugu magacdaraynaa galka macaamilka kadib, ka dibna ku dar shaashadda goobta ugu dambeysa, ee la habeeyay. Waxaan sidoo kale u qaabeynaa faahfaahinta xaashida qaabka si markaa macmiilku u garto cidda dhistay mustaqbalka.
Haddii a Mawduuca Ilmaha kuma jiraan, wali waad abuuri kartaa mid. Tusaalaha tani waa Mawduuca Carruurta ee aan u horumarinay hay'addeena. Mawduuca ayaan ugu magac darnay Highbridge 2018 ka dib boggeena iyo sanadkii la hirgeliyay oo Mawduuca Carruurta lagu rido galka kow-sideed. Xaashida CSS waxaa lagu cusboonaysiiyay macluumaadkeena:
/ * Magaca Mawduuca: Highbridge 2018 Sharaxaad: Mawduuca ilmaha loogu talagalay Highbridge ku saleysan mawduuca Avada Qoraa: Highbridge
Qore URI: https://highbridgeconsultants.com Template: Avada Version: 1.0.0 Text Domain: Avada */
Waxaad kiraysatay wakaalad si ay goob kuugu dhisato, waxayna ku hirgeliyeen Mawduuc Waalidka si fiican loo taageeray iyo Mawduuc Carruur si heer sare ah loo habeeyay. Ka dib markii la sii daayo goobta oo aad dhammaystirto qandaraaska, WordPress wuxuu sii daayaa cusbooneysi deg-deg ah oo hagaajiya godka amniga. Waxaad cusbooneysiineysaa WordPress oo bartaada ayaa hadda jaban ama bannaan.
Tags: awadadulucda ilmahadulucda waalidkakudoodwordpress theme ilmahawordpress theme waalidmawduucyada erayada